Magaalada Bosaaso oo dagaal lagaga dhawaaqay iyo Ciidamo ka tirsan. – Kismaayo24 News Agency
by admin 3rd December 2019 0127
Ciidamada Amniga ee Puntland ayaa maalmihii u dambeeyey ka waday magaalada Boosaaso xirida cid kasta oo ka soo horjeeda aragtida Madaxweynaha Puntland, waxaana ilaa hadda la xiray 4 kamid ah nabadoono, Aqoonyahano iyo Waxgarad kasoo horjeestay siyaasadas.
Siyaasi Bille Qabowsade oo horey xilal kala duwan uga soo qabtay Puntland, kana mid ahaa xubnihii dhawaan qabtay shirka Jaraa’id ama akhriyey warsaxaafadeed kasoo baxay Odayaasha Boosaaso ayaa sheegay in aysan marnaba aqbali doonin in xoriyadooda laga qaado.
Qabowsade ayaa sheegay in ay la dagaalamayaan, iskana difaacayaan cid kasta oo isku dayda in ay khatar galiso noloshooda, isagoo sheegay in aysan marnaba aqbali doonin in jihada wanaagsan laga leexiyo.
Siyaasigan ayaa sheegay in ay Diinta Islaamku qabto in uu qof kasta iska difaaco wixii halis ku ah naftiisa, wuxuuna sheegay in aysan raali ka noqon doonin in xoriyada laga qaado.
Madaxtooyada Puntland ayaa ciidamada Badda Puntland iyo kuw Birmadka u adeegsatay in la xiro qaar kamid ah Nabadoonada iyo siyaasiinta ka aragtida duwan Madaxweynaha, waxaana talaabadan cambaareeyey shaqsiyaad kala duwan.
Ahmed sudani 23rd May 2018
DEG DEG: Ra’isul wasaare Sharmaarke oo War xasaasi ah ka soo saaray Go’aankii ay gaartay Maxkamadda ICJ
Wax badan ka ogow Qayradka qarsoon ee Gobolka Jubbada hoose +Muqaal